Lukaku oo hadlay kaddib labadii gool uu u dhaliyay Belgium…(Laakiin muxuu ugu orday dhanka xiddigaha keydka markuu goolka dhaliyay?) – Gool FM
Lukaku oo hadlay kaddib labadii gool uu u dhaliyay Belgium…(Laakiin muxuu ugu orday dhanka xiddigaha keydka markuu goolka dhaliyay?)
Byare June 18, 2016
(France) 18 Juunyo 2016. Romelu Lukaku ayaa qiray inuu tafaraaruq iyo isku duubni la’aan uu ka jiray xulkiisa Belgium ee tartanka Euro 2016 laakin wuxuu ku kalsoon yahay in ay sheekadu hagaagsami doonto kaddib guushii 3-0 ay dhawaan ka gaareen xulka Republic of Ireland.
Kooxda Marc Wilmot ayaa soo jiitay dhaleeceymo ah ruux la’aantooda guul daradii 2-0 ay kala kulmeen xulka Talyaaniga kulankoodii furitaanka ee group E.
Yeelkeede, dib ayay u heleen toodii ugu fiicnayd ciyaartii dhawaan ka dhacday Bordeaux oo uu labo gool dhaliyay Lukaku halka uu midka saddexaad dhaliyay Axel Witsel.
Xasilooni daro iyo tafaraaruq ayaa ka dhex jiray xiddigaha Belgium ee wajahayay Iraland sida uu Lakaku sheegayo laakiin wuxuu sheegay weeraryahanka in wada hadaladii ay yeesheen khamiista ay wanaajisay xaalada.
“Aad baan u daganahay, sidoo kale kooxda aad bey u dagan tahay,” Lukaku ayaa yiri sidaa.
“Waxaan yeelanay kulan kooxeed labo maalmood ka hor, halkaa uu ruux kasta ku soo muujiyay fikiradiisa, Haa si fiican ayaan u ciyaarnay.
“Kooxdu si fiican ayay u jawaab celisay, waxaan sameynay wixii ay ahayd in la sameeyo, waxay ahayd inaan ciyaarno kubbad fiican aana shabaqa ilaashano. Taasi waa waxaan sameynay, iminka waa kulanka xiga.
“Waxaan la tacaaleynay shaqsiyado badan qofkastana wuxuu doonayay inuu guuleysto ciyaartoydana waxay bixiyeen wax kasta oo ay hayeen.
“Mararka qaar waxaa jira wada hadalo, laakiin waa caadi, qof kasta wuxuu doonayaa inaan isku si u fikirno u maleyn maayo inaan sidaa ahayn kulankii Italy. Laakiin iminka waan nahay.
Dhanka kale mar uu Lukaku ka hadlayay sababtii uu dhanka ciyaartoyda keydka ugu orday markii uu goolka koowaad dhaliyay ayaa yiri.
“Walaalkey Jordan ayaa keydka ku jiray waxaana doonayay inaan la dabaal dego isaga markasta isag wuxuu halkaa u joogaa inuu i caawiyo sidaa darteed waxaan doonay inaan uga mahad celiyo isaga midaa.”.
EURO 2016: Hungary iyo Iceland oo isku garab dhacay….(Xulka Hungary oo laga dhaliyay rigooradii ugu horreysay ee Euro 2016))
GOTHENBURG RAMADAN CUP: Kooxda Daraawiish FC oo usoo baxday wareegga 2-aad & natiijooyinka kulamadii shalay + Sawirro
Rio Ferdinand oo shaaca ka qaaday sir cusub oo layaab leh kuna saabsan dabeecadda Cristiano Ronaldo
“Waxaan kaga aamusnaa Zidane muddo labo sano ah, sababtan darteed” – Halyeey hore xulka qaranka France ah